Accueil > Gazetin'ny nosy > BNI Andohanilakaka : Novakian’ny jiolahy
BNI Andohanilakaka : Novakian’ny jiolahy
Sambany no nisy asan-jiolahy tahaka izao angamba tao amin’ny Faritr’Ihorombe. Tao Andohanilakaka, ao anatin’ny distrikan’Ihosy no niseho ny tantara, ny alatsinainy 11 oktobra lasa teo. Lehilahy roa sy vehivavy iray no namaky ny banky BNI tao an-toerana ary tamin’ny fomba avo lenta no nanaovan’izy ireo izany.
Araka ny fampitam-baovao nataon’ny fitaleovam-paritry ny polisim-pirenena ao Ihorombe, dia ny alatsinainy tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva teo ho eo no tonga tao amin’ity banky ity ireo olona telo ireo ary nilaza fa mitady ny talen’io banky io. Nisandoka ho mpiasan’ny banky avy aty Antananarivo izy telo mianadahy ka nirahina hanamboatra ny “groupe électrogène” simba. Noraisin’ilay talen’ny banky moa ireto jiolahy ireto, ary tsy votan’izay ihany fa mbola nitady trano fatoriana ho azy ireo.
Niverina tao amin’ny biraon’ny tale indray izy ireo niaraka tamin’ny mpiambina iray ka tao no nambanan’ireo jiolahy basy ka nofatorana ny tanana sy ny tongotr’izy ireo ary nasiana scotch ihany koa ny vavany.
Taorian’izay dia nasain’ireo jiolahy nantsoina ny tale lefitry ny banky, ary rehefa tonga tao io olona io dia avy hatrany dia voambana basy koa ary noterena hanome ny laharan’ny vata fitehirizam-bola. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny vola efatra gony ka nampidirina tao anatin’ny fiara 4×4 izay fananan’ny banky.
Nitsoaka nianatsimo, izany hoe nihazo an’i Toliara ireo olon-dratsy niaraka tamin’ny vola ka tany izy ireo no tratran’ny mpitandro filaminana. Tsara marihana fa tsy nisy mihintsy ny pao-basy tamin’ity fanafihana ny banky BNI tao Andohanilakaka ity, ary tsy nisy ihany koa ny naratra.